Black Shark 2, nyocha na ule nke ugwo egwuregwu nke kacha mma | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga anyị nyere gị mmetụta mbụ anyị nwere banyere Black Shark 2, mbipụta nke abụọ nke ọnụ ọnụ nke na-abịa iji gboo mkpa dị ọcha nke ndị hụrụ egwuregwu vidio n'anya, bụ nke e mere site na igwu egwu na ya na-enweghị obere oke, ana m akwado ya ị na-aga site na mbụ echiche iji nweta echiche nke ihe ị ga-ahụ ugbu a.
Oge eruola, anyị etinyela Black Shark 2 n'ule, ị ga-ahụ anyị ka o si agagharị mgbe ị na-egwu egwuregwu, ka ike ngwa ngwa ya ndị ọzọ si akpa agwa na arụmọrụ nke igwefoto ya. Nọnyere anyị na nyocha a miri emi banyere Black Shark 2, ihe dị mkpa gam akporo gam akporo ọnụ.
Dị ka oge niile, ọ bụ ezie na ị maraworị nke a, ihe anyị ga-ahapụ gị ọzọ bụ nkọwa na ọkwa ngwaike, yana ezigbo nkwado. O sina dị, Ana m akwado gị ka ị gafee vidiyo nke na-eduga nyocha a, Nke ahụ bụ ebe ị ga - enwe ike ịhụ eziokwu siri ike nke akparamagwa nke Black Shark 2 n'ọnọdụ dị iche iche, site na arụmọrụ n'ezie na egwuregwu vidiyo na ese foto, ikekwe akụkụ kachasị njọ nke ọdụ a ị nwere ike ịzụta HERE ọnụahịa kacha mma.
1 Kedu akụkụ nke ọnụ, nsogbu ụbọchị a?
2 Ezubere ka egwu nye Shark Space
3 Adịghị ike ya: Igwefoto
4 Multimedia na obodo kwụụrụ, ọ bụ maka gị
Kedu akụkụ nke ọnụ, nsogbu ụbọchị a?
Eziokwu doro anya, Black Shark 2 nwere akụkụ nke 163,61 x 75 x 8,77 millimeters, gosipụtara ihe karịrị ya niile ọkpụrụkpụ, ha niile nwere ibu karịa gram 200 na mkpokọta. Anyị na-eche ihu ekwentị na, yana ya na ala ya na elu ya na ihuenyo, na-eme ka ọ buru ibu, nke a fọrọ nke nta ka ọ ghara ime ka ọ ghara iji ya jiri otu aka, yabụ, ọ bụrụ na ị na-echekwu echiche banyere ụbọchị ị ga- ụbọchị ọnụ na na smartphone igwu egwu, ikekwe ị na-emehie dị oke njọ. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile dị njọ na ọkwa ọkwa, yana maka ebumnuche ya, ọ dị mma.
Ọ na-agwakọta iko na metal, contoured n'ụzọ dị ka ọ na-enye anyị ohere idowe ya horizontally na na ọ bụ kpam kpam obi ụtọ n'aka, nke a pụtara na ọ dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ igwu egwu, ruru ihuenyo mere iji ya panoramic mode bu ihe obi uto. Ọ bụ mgbe anyị na-egwu egwu mgbe anyị hụrụ ihe dị mkpa. Agbanyeghị, ekwesịrị m ịkọ n'izu a na-ekpo ọkụ na m na-anwale ya na okpomọkụ ya arịgoro ntakịrị, ọbụna na-ewe iwe n'oge ụfọdụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị karịa ọnụ ndị ọzọ dị ka iPhone X, mana ọ na-adọrọkwu uche mgbe anyị chetara na ọ nwere sistemụ jụrụ oyi.
Ezubere ka egwu nye Shark Space
Nke a bụ ebe Black Shark 2 ga-amalite na-enwupụta na ìhè nke aka ya, ọ bụghị naanị n'ihi logo azụ na LEDs abụọ dị n'akụkụ nke enwere ike ịhazi obi ụtọ n'ime ntọala ahụ, mana n'ihi na ọ nwere ihe niile ịchọrọ ngwaike na ngwanrọ na-agakọ aka na-achọ ahụmịhe onye ọrụ emegharịkwuo maka mkpa nke otu, Ka anyị leba anya na atụmatụ niile dọọrọ uche anyị:
Nna ukwu metụrụ: Na nke a, ekwentị na-echekarị nrụgide na mpaghara ụfọdụ nke ihuenyo ahụ, mgbakwunye na-adọrọ mmasị nke ndị mmepe na-erigbu
240Hz nwee ume na ogwe aka: Mgbe arụ ọrụ na ọnọdụ egwuregwu anyị na-achọta nzaghachi kachasị dị nro nke anyị nwere ike iche n'echiche, nke a bụ ntakịrị ọhụụ mgbe ị na-egwu egwu egwuregwu vidio na ndị agbapụ.
El moto ọmajijiji Na-emegharị: O doro anya na, dịka m kwuru na vidiyo, otu n'ime ihe kachasị mma m chọtara na gam akporo, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka 3D Touch nke iPhone na ntụgharị, ọ doro anya na emezuru ya na ahụmịhe egwu na-adị mma.
Agbanyeghị, ọ bụ Jehova ka otuto niile na-agara Oghere shark, usoro njikwa egwuregwu vidio anyị nwere ike ịnweta na bọtịnụ n'akụkụ, nke anyị ga-enwe ọrụ ndị a:
Egwuregwu n'ọdụ ụgbọ mmiri: Oche carousel na egwuregwu vidio anyị tinyegoro.
Egwuregwu Gamer: A ada ada ngalaba ebe anyị ga-enwe ike ijikwa Nna-ukwu metụrụ, mee ka RAM kwenye, gbanwee ọkwa ma mezie njikwa. Okwesiri ikwuputa na anyi enweghi ike izo aka na njikwa ebe obu na anyi enwebeghi ike nwale ha karia ngosi nke Black Shark na Madrid, ya mere anyi enweghi ike ikpe ikpebi nke a.
Ozi banyere Fps, ọnụ ọnụ okpomọkụ na ọbụna arụmọrụ.
Nke a bụ ebe Black Shark 2 na-egosi obi ya, ihe ntanetị kachasị mma m hụtụrụla na ntanetị maka egwuregwu vidio. Nke ahụ bụ ihe na-enye ọdụ a ihe ọ bụla ga - abụ, n’ezie emebere maka ndị kachasị achọ ọrụ ma a bịa n’egwu na ama gam akporo ama, ị gaghị enwe ihe ga - eme ka ịzụta ya ma ọ bụrụ na ọ bụ maka nke a
Adịghị ike ya: Igwefoto
Ọ ghaghị inwe isi ihe dị njọ ma ọ bụrụ na anyị atụle ọnụahịa ahụ. Nke mbụ pụtara ìhè, o nwere kamera nke na-adịkarị n'etiti etiti ma na-echetara anyị ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ China nke ọ dabeere na ya, Xiaomi. Anyị nwere igwefoto igwefoto abụọ na azụ, ha si 12 MP nwere oghere f / 1.75 na otu onye n'ime ha nwere oghere telephoto maka Zoom x2. Igwe okwu ahụ yiri nke Xiaomi ma ana m akwado ka ị lelee vidiyo ka ị hụ otu o si arụ ọrụ nke ọma. Anyị na-amalite site na iji foto dị mma, na-agbachitere onwe ya n'ọnọdụ ndị nkịtị, ọ bụ ezie na enwere ike ịkwalite ya mgbe niile site na iji HDR, agbanyeghị, enweghị ike ịsị na ọ ga - emeziwanye ihe karịa ịnwepụta agba agba ntakịrị ma belata nchapụta nke onyonyo ahụ.
Ọ na-ata ahụhụ site na ọnọdụ dị egwu ma ọ bụ mgbanwe ọkụ, na-egosi mkpọtụ nke ihe ọ bụ, igwefoto dị n'etiti. N'ezie, anyị nwere ọnọdụ ọgụgụ isi, nke ọzọ dị m ka ọ bụ nzacha dị mfe nke na-edozi agba karịa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mana ekwesịrị ịmara na ọ na-eme ka foto ahụ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ (yana enweghị ezi uche). Banyere ọnọdụ eserese anyị na-ahụ ezigbo ngosipụta, ngwanrọ na-akwado nke ọma, ọ na-enye nsonaazụ zuru oke na nke enweghị ike ịta ụta n'ọnọdụ ọnọdụ ọkụ dị mma. Otu ihe ahụ na-eme na ese foto na ọnọdụ ọkụ dị ala, ọ na-egbu ka esi emeri ọnọdụ ndị a, na oke nhazi ee, mana ... ọ dị mkpa na obere ọkụ, nke a bụ ezigbo ihe akaebe.
Banyere igwefoto selfie anyị na-ahụ otu ihe mmetụta 20 MP nwere oghere f / 2.0 nke na-agbachitere onwe ya, nwere ọtụtụ ikike nke ihe mmetụta azụ ma ga-enye anyị ohere iwere selfie oge ụfọdụ Maka netwọkụ mmekọrịta na-ejighi ngwa ngwa, ọ naghị apụta maka mma, ma ọ bụ maka njọ. N'ikpeazụ, na ọdụ a anyị nwere ohere nke ịdekọ ọdịnaya na 4K na 1080p na 30 Fps n'ụzọ kwụsiri ike, anyị ahụghị nsogbu ọ bụla n'iji ya ma ọ bụ ịdị mma dị mma, agbanyeghị, anyị enweghị njigide igwe, ọ na-egosi . Igwe okwu na-edekọ ọdịyo na otu ọwa ma ị nwekwara ike ịhụ nsonaazụ ikpeazụ na vidiyo nke na-eduga nyocha a iji mee mkpebi nke gị.
Multimedia na obodo kwụụrụ, ọ bụ maka gị
Ihuenyo ahụ dị mma, anyị na-ahụ nchapụta zuru oke maka ọnọdụ ọ bụla kwa ụbọchị nke na-enye anyị ohere iri ihe ọdịyo ọdịyo n'ime mkpebi HD zuru oke na HDR, ndị ojii dị ọcha na ogwe aka nhazi ya na ngalaba ntọala ga-eme ka anyị nwee afọ ojuju nke agba. nke a na-enyekarị ụdị ihuenyo a. Ihe ọdịyo na-eme ntakịrị, anyị na-ahụ ụda stere dị ike ee, mana enwere ike ịbubiga ókè na nke ahụ na-efunahụ ogo ka anyị na-abawanye olu. Will ga-enwe ike ịnụ ihe niile n'ụzọ zuru oke, mana jiri mma daa.
Banyere obodo kwụụrụ onwe ya, kedụ ihe ichere. Anyị nwere 4.000 mAh nke dị mma ọ bụrụgodi na anyị nwere egwuregwu dị egwu. N'ime ule m, anyị abịarutela oge awa 7 na 8 nke ihuenyo, Yabụ mgbe anyị na-egwu egwu, anyị ga-eji otu ụbọchị were, ụbọchị abụọ ma ọ bụrụ na anyị ejiri ekwentị eme ihe. Cheta na anyị enweghị ọdụ ụgbọ mmiri Jack 3,5mm, mana anyị nwere nkwụnye USB-C.
Nzube na ihe na-agakọ oke zuru oke, siri ike ime nke ọma
Nnwere onwe dị ịrịba ama ọbụlagodi mgbe anyị na-egwu egwu
Njikọ nke sọftụwia fọrọ nke nta ka ọ dị ọcha na-eme ka ojiji ya nwee obi ụtọ
The price bụ nnọọ ọdịnaya na-ekiri ndị ahịa
Igwefoto bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti etiti
Ọ dị arọ ma buru ibu, agaghị ekwe omume iji otu aka mee ihe
Anyị tụrụ anya otu panel nke 120 Hz
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Black Shark 2, nyocha na ule nke egwu egwuregwu nke kacha mma